Mamely Ny Ebola, Ahoana Ny Hanentanana ny Bilaogera Gineana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2014 20:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, 한국어, Deutsch, Español, Français
Anisan'ireo bilaogera malaza indrindra ao Ginea i Alimou Sow. Mpamorona ny bilaogy Ma Guinée plurielle, nahazo loka tamin'ny fifaninanana bilaogy miteny frantsay (frakôfôna) tsara indrindra nokarakarain'ny Deutsche Welle taona 2013 izy. Vao avy namoaka lahatsoratra tao amin'ny pejy Facebook-ny izy tamin'ny Andro Iraisam-pirenena hoan'ny bilaogy, 31 Aogositra 2014:
Fa inona no nitranga tamin'ny tontolon'ny bilaogy Gineana? Manana tontolon'ny bilaogy ve i Ginea? Sa tontolon'ny Twitter? Sa matetika isika toa mpitazana mandalo fotsiny ny aretin'izao tontolo izao? Inona no andraikitra raisintsika amin'ny maha-olom-pirenena eto amin'ny aterineto? Iray amin'ireo firenena vitsy — raha tsy hoe tokana — amin'ny vaki-paritra misy isika tsy mbola nikarakara #‎BarCamp‬ na ‪#‎BlogCamp mihitsy. Mandritra izany, ahitana rafi-piarahamonina olom-pirenena mpiserasera tena mavitrika ao amin'ireo mpifanolo-bodirindrina amintsika izay mifanentana mandrakariva isaky ny hetsika lehibe mba hitondra fanampiana tsy mitady tombony hoan'ireo mpiray tanindrazana amin'ny alalan'ny teknololojian'ny aterineto. Toy izany ny zava-misy ankehitriny ao Côte d'Ivoire sy ao Senegaly mba hiadiana amin'ny valan'aretina Ebola izay naelin'i Ginea ao amin'izy ireo.
Namaly izany lahatsoratra izany ireo bilaogera vitsy fanampiny ary nanampy fanehoan-kevitra tamin'ny resaka. Niombo-kevitra tamin'ny filazana i Alfa Diallo fa taraiky i Ginea ary mila mitsangana dieny izao:
Nandray am-po ny tenin'i Sow i Tafsir Balde. Nilaza izy fa ny Gineana no tokony ho tompon'andraikitra, indrindra ireo avy ao amin'ny am-pielezana (monina ao Maraoka i Balde):
Nihevitra i Thierno Diallo fa mahavita mampandroso ny fandraisana andraikitra ara-teknolojia ao Ginea ny bilaogera sasany, saingy tokony hahay hifandamina: